February 08, 2017 – Xildhibaanada Baarlamaanka Federalka Soomaaliya ee maanta lagu wado inay u codeeyaan madaxweynaha Cusub ee xilka dalka hayn doona 2017-2020, ayaa iyagana maanta ku jira liiska baaritaanka Xubnaha ka qaybagalaya Doorashada Madaxweynaha dalka oo lagu baarayo albaabka hore ee xarunta ciidamada Midowga Afrika ee Amisom.
Sida ay soo warinayaan qaar kamid ah suxufiyiinta ku sugan Xerada Xalane ee doorashada ka qaybgalaya, ayaa sheegaya in cid waliba ee doonayso inay gudaha u gasho xaruntaasi lagu suubinayo Baaritaan adag.
Baaritaanka kadib ayaa waxaa xildhibaanada lagu daabulayaa basas, iyagoo loo qaadayaa xarunta doorashada ay ka dhaceyso ee ku taala dhabarka dambe ee Xarunta ciidamada Cirka ee Afisiyooni.
Waxaana iminka lagu guda jiraa saacadihii ugu dambeeyay ee diyaargarowga doorashada dalka, waxaana la filayaa in goor dhaw si rasmi ah ay doorashada uga bilaabato xarunta Afisyoone ee Magaalada Muqdisho.
HALKAN SI TOOS AH (VIDEO) U GALA SOCO DOORASHADA MADAXWEYNAHA